Chiremba Wenyika, naFranz Kafka, nhoroondo yeupenyu? | Zvazvino Zvinyorwa
Chiremba wekumaruwa, naFranz Kafka
John Ortiz | | Vanyori, Type, Mabhuku, Nyaya
Chiremba wekumaruwa inyaya pfupi nemunyori weCzech Franz Kafka. Yakaonekwa nekutanga kuburitswa sechikamu che Ein Landarzt: Kleine Erzaehlungen, muna 1919. Zvinoenderana nerondedzero yebhaibheri yeiyo Biology Resource Center (GALE Boka, 2005), iri basa chiratidzo chezviitiko zvemunyori. Zvakanaka, muna Nyamavhuvhu 1917 kuongororwa kwechirwere chetibhi kwakasimbiswa, chirwere chaizopedzisira chaendesa kurufu rwake muna 1924.
Chiremba wekumaruwa Iyo ine ese akasarudzika maficha eaya anonzi "Kafkaesque tales". Mavari, protagonist anowanzozviisa mumamiriro ezvinhu akaomarara pasina tsananguro yakajeka uye pasina kwekutiza. Nharo dzaKafka dzinowanzo kuratidza kupesana kunoshamisira kwenzanga yazvino uye kuratidzwa kusingaperi pahuMwari nekusarongeka kwevanhu. Pasinei nekurema kwebasa rake, munyori arimo pane runyorwa rwevanyori vakagamuchirwa mushure mekufa. Fungidzira zvakanaka zvebasa rake, izvo Borges anomukurudzira semunyori kuti averenge.
1 Bibliographical synthesis yaFranz Kafka
1.1 Franz Kafka, iyo psyche yeanotambudzwa shasha
1.2 Dzidzo yaKafka nebasa
2 Chiremba Wenyika uye Franz Kafka's Fiction Shorts
3 Kuongororwa kwechiremba wekumaruwa
3.1 Mutoro kubva mumaonero eKafkaesque axioms
3.2 Inobata chikamu
3.3 Chiremba wenyika uye Franz Kafka, murwere
Bibliographical synthesis yaFranz Kafka
František Kafka akaberekwa muna Chikunguru 3, 1883 muPrague, Bohemia (yava kunzi Czech Republic). Akafa netibhii mudokoriro musi wa3 Chikumi 1924, muKierling, Klosterneuburg, Ositiriya. Akavigwa kumakuva echiJuda muPrague - Straschnitz. Baba vake vaive Hermann Kafka, mutengesi uye mugadziri; amai vake, Julie (Loewy) Kafka. Hama dzake, dzese dzamai nedzamai, dzaive dzakangwara uye zvine hunyanzvi.
Franz Kafka, iyo psyche yeanotambudzwa shasha
Aive nemwanakomana naGrete Bloch, asi haana kumbobvira aroora chero vakadzi vaakaroorana navo. Sekureva kwa Miguel Ángel Flores weAzcapotzalco Metropolitan Autonomous University (Mexico), “Vakadzi vaaigona, asi akatanga zvipingamupinyi kuhukama hupi zvahwo. Baba vaidzvinyirira, vaimushora, mushambadzi akabudirira, nehunhu hwake hwakasimudzira kunzwa kwake kwekutadza uye kuiswa panzvimbo isiri iyo ”.
Wake wekupedzisira waaizivikanwa naye aive Dora Diamond, uyo akamuswededza padyo nechiJuda kusvika kumagumo ehupenyu hwake.. Franz Kafka aive anorwara, airwadziswa, murume aishushikana uyo kiriniki yekuongorora haina kumbobvumiranwa. Nekudaro, izvozvi zvava kutenda kuti akarwara neschizoid hunhu kusagadzikana.
Dzidzo yaKafka nebasa
Muna 1906, akawana doctorate in law kubva kuFerdinand-Karls University muPrague. Akashanda semunyori wenhau zviri pamutemo kwaRichard Loewy muPrague muna 1906. Pakati pa1908 na1922 aive nhengo yeKingdom of Bohemian Occupational Accident Insurance Institute, Prague, sehunyanzvi mukudzivirira tsaona. Zvakare, aishandira mugadziri Asbestos Anoshanda Hermann & Co, muZizkov, Bohemia.
Chiremba Wenyika uye Franz Kafka's Fiction Shorts
Ein Landarzt: Kleine Erzaehlungen (Chiremba wekumaruwa: nyaya pfupi), rakabudiswa muna 1919 muAustria, mukati meunganidzwa gumi nemana nyaya pfupi. Kuverenga kwaro kunokurumidza uye kutsetsenura, kunogona kupedzwa mumaminetsi gumi nemashanu (kana zvishoma). Mushure mekufa kwaKafka, anopfuura gumi nemaviri mabhuku ezvinyorwa zvekunyepedzera zvakabuda. Mamwe mavara ake ekuunganidzwa epfupi ngano nyaya dzakaburitswa muhupenyu ndea:
Der Heizer: Ein Chidimbu (Iko kuunganidza: chidimbu - 1913).
Betrachtung (Kufungisisa - 1913).
Shanduko (rakashandurwa se Metamorphosis kuChirungu naAl Lloyd - 1915).
Das Urteil: Eine Geschichte (Kutongwa: nyaya - 1916).
Ein Hungerkunstler: Vier Geschichten (1924). Inosanganisira nyaya dzakadudzirwa mumashure, senge Nyanzvi ine nzara, Mukadzi mudiki, Kutambudzwa kwekutanga y Josefina muimbi; kana, Rudzi rweMbeva. Yakaburitswa achangofa, asi Kafka aive nenguva yekuongorora anenge ese magwaro.
Saizvozvo, Kafka akaburitsa akati wandei enganonyorwa, madhiri, uye nhaka yake yakatungamira kune akati wandei mabasa ekuunganidza. Izvi zvakaitika nekuti munyori weCzech haana kutsikisa mazhinji emabasa ake achiri mupenyu. Zvimwechetezvo, shamwari dzake nemhuri havana kuteerera zvaaida uye havana kupisa mabhuku avo kana zvinyorwa mushure mekufa kwake. Nhasi, mazhinji ezvinyorwa zveKafka zvakarasikirwa neNazism zvichiri kuongororwa.
Kuongororwa kwechiremba wekumaruwa
Jorge Alberto valvarez-Díaz anobva kuComplutense University yeMadrid, anotsanangura Chiremba wekumaruwa sekugona kuverenga kwetsika. Mukuburitswa kweMexicoan Medical Gazette (2008), valvarez-Díaz anotsanangura kuti, kunyangwe hazvo kupfupika kwenyaya iyi, dudziro yake "yaive, iri uye icharamba ichifadza sekuoma kwayo"
Mutoro kubva mumaonero eKafkaesque axioms
En Chiremba kumaruwa, Kafka anotyora pfungwa yebasa uye anoibata nenzira dzakasiyana. Ehezve, panguva ino akakurumbira mana Kafkaesque axioms akatsanangura mumagazini Vanyori uye Vanyori veVadiki Vakuru (Vol. 31, 2000). Mune maviri ekutanga, dzidziso yebhaibheri inopesana nehunhu hwevanhu. Ikoko, kunyangwe zviwonekeke sei, mutemo mutsvene hauzombove wakasarudzika sehunhu hwevanhu.
Iwo mamwe maaxioms maviri anowirirana: pane nzira chaiyo yekurarama hupenyu. Kuwanikwa kwaro kunoenderana pasimba remunhu kuwana masimba ayo anowanzo kuve asingazivikanwe nevanhu. Kuna Franz Kafka, mamiriro ekupedzisira akaipisisa kumunhu ndiko kurasikirwa nechiremera. Iyi pfungwa inoratidzwa zvakajeka muchikamu chinotevera cheA Rural Chiremba:
“—Doctor, regai ndife. Ndinotarisa-tarisa: hapana akambonzwa. Vabereki vakanyarara, vakazendamira mberi, vakamirira maonero angu. Sisi vaye vauya nechigaro pandiri kuti ndiise bhegi rekutakura. Ndinoivhura uye ndinotarisa kuburikidza nezviridzwa zvangu. Jaya rinoramba richiwedzera maoko kwaro kwandiri, kundirangaridza nezvechikumbiro chavo. Ini ndinotora zvigunwe zviviri, ndinozviongorora nemwenje, uye ndozvidzosera pasi.
Ehe, hongu - ndinofunga kumhura - mune dzakadai vanamwari vanobatsira, vanotitumira bhiza ratiri kuda uye, sezvo isu tiri kukurumidza, vanotipa rimwe. Pamusoro pezvo, vanotitumira mukomana akatsiga… ”.
Shamwari yake Max Brode - uyo aichengeta akawanda mapepa ake - akanongedza, “Kafka akakwezva vakadzi muhupenyu hwake hwese. Haana kuzvitenda, asi zviri pachena ichokwadi. " En Chiremba wekumaruwa, protagonist anopinda mumamiriro ekufa - akafanana nenyaya dzeKafkaesque- uye "anobaira" Rosa, mubatsiri wake akatendeka. Pakati penyaya pane pachena kuremekedza kwakadzika kunoitwa nemunyori kuvakadzi.
Iye murombo shamwari anosara pane tsitsi dzeiyewo mushushi uyo anoita kuti zvigoneke kuendeswa kwachiremba kuenda kumba kwemurwere. Sezvo mamiriro ezvinhu anoshungurudza anoitika, tarisiro iyo chiremba anonzwa kune waanoshanda naye inoonekwa. Kushushikana kuri kuwedzera nekuti protagonist anonzwisisa kuti zvakashata izvo Rosa angatambura zvakakonzerwa naye. Zvese zvinogoneka zvinobuda ndezvekunyepa, sezvingaverengerwa mundima inotevera:
"Chete zvino ndave kuyeuka Rosa: Chii chandingaite? Ndingaite sei kuti ndichengetedze? Ndomubuditsa sei kubva pasi pemurume iyeye? Makiromita gumi kure, nemabhiza asingadzoreki akasungirirwa mungoro yangu, handizive kuti vakasunungura matomu sei, handizive kuti vakavhura sei mahwindo kubva kunze, misoro yavo ichipfuura nepakati pavo uye vakatarisa murume airwara, asinganeti nemhere yehama. Ndinodzoka, ”ndinofunga, sekunge mabhiza ari kundikumbira kuti ndidzoke, asi ndinorega hanzvadzi, iyo inofunga kuti ndiri kugunun'una nekupisa, ndibvise bhachi rangu. Vanondipa girazi reramu. Harahwa yakandiombera pabendekete. Kundipa pfuma yako kunoruramisa uku kujairana. Ndinodzungudza musoro wangu: zvaizoita kuti ndirware kuti ndinzwe mukati mechembere mutete wepfungwa. Kune izvo zvoga ndinoramba kunwa ”.
Chiremba wekumaruwa naFranz Kafka, murwere
Franz Kafka akatorwa.
Simba rechirongwa uye nhaurirano dze Chiremba wekumaruwa pamwe nekuda kwekukwanisa kwavo. Kunyangwe iyo nyonganiso uye inopokana mamiriro angaite senge ekunyepedzera, rondedzero inofuridzirwa nezviitiko zvaKafka iye nemhuri yake. Izvi zvaionekera mune rake Diaries yakanyorwa muna 1912, pamwe nekuumbwa kwakapepetwa naHerler, Pocket Mabhuku, Iyo Yekutanga Kafka (1983).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Chiremba wekumaruwa, naFranz Kafka
James Ellroy. Iyo Mad Imbwa inotendeuka makumi manomwe nemaviri. Mutsara kusarudzwa